दैव पनि कति निष्ठुरी ? श्रीमति अस्पतालमा श्रीमानको अबस्था यस्तो ३ बर्षीय छोराको विचल्ली (भिडियो) – Classic Khabar
April 15, 2021 302
उनका हात खुट्टा चल्दैनन । हात खुट्टा नचलेपछि हिड्न डुल्न सकिदैन । तर उनलाई दिनहुँ अस्पताल नधाई हुँदैन । एकातिर श्रीमती अस्पतालमा इन्तु न चिन्तु भएर बसेकी छन् भने घरमा ३ वर्षकी सानी छोरी छन् । हातखुट्टा नचल्ने उनी श्रीमतीको स्याहार गरुन् की छोरीको पेट भरुन् । उनको आफ्नो ब्य था त छंदैछ । यदि इश्वर छन् भने एउटै मानिसलाई यति धेरै दुख किन दिन्छन् होला ? आफ्नै सन्तानलाई यति धेरै दुख दिएर इश्वरले कसरी हेर्न सकेका होलान् ?
Prevज्योतिषहरुको खुलासा : २०७८ सालमा केपी ओली झनै शक्तिशाली, हिन्दूराष्ट्र पनि स्थापना हुन्छ
Nextहे दैव ! हाम्रो आमा बचाइदिनु भन्दै यी सानासाना बाबुहरू, हस्पिटलमा यति धेरै पैसा तिर्न बाकि (हेर्नुस् भिडियो )